China Egwuregwu Floodlights 1000w China Manufacturers & Suppliers & Factory
Egwuregwu Floodlights 1000w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Egwuregwu Floodlights 1000w)
Ihe eji eme ka ọkụ ọkụ na-agba ọkụ 1000W 130000LM
Igwe mmiri nke a na-agba agba 1000w nwere ọnụ ọgụgụ 130,000lumens. Ọnụ Ahịa Iju Mmiri Egwuregwu egwu dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a na- enwu ọkụ ọkụ bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe omimi nke iju mmiri a...
1000W Led High Mast Iju Mmiri Ighalo Retrofit Luminaire
Nke a 1000W High Mast Led Retrofit nwere ọnụ ọgụgụ nke 130,000lumens. Ìhè Ìhè nke Ọdachi Gafere dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu akwa Led High Mast Lreaire a bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri....
Nnukwu ọkụ Mast Light 1000w a nwere ọnụ ọgụgụ dị 130,000lumens. Nnukwu Mast Lighting dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Nnukwu ọkụ Mast Lighting a bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Ngwakọta a...
Sistemụ Lighting 1000W Stadium 130000LM
Igwe ọkụ ọkụ 1000W Stadium Lighting Systems nwere ọnụ ọgụgụ 130,000lumens. Igwe ọkụ ọkụ Cricket Stadium dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ ọkụ Eaton Stadium bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri....
Egwuregwu Floodlights 1000w Egwuregwu Floodlights Egwuregwu egwu nke 1000w Ikanam Egwuregwu Light Mast 500w Egwuregwu Gas Gas 100W Egwuregwu Low Bay Light Fit Led Arena Floodlights Egwuregwu Basketball 500W